Runyerekupe runonyevera kuti Apple Watch Series 3 yaizove new screen | Ndinobva mac
Runyerekupe runonyevera kuti Apple Watch Series 3 yaizove new screen
Tiri kuona mashoma mashoma makuhwa pamusoro peiyo ingango nyowani Apple Watch Series 3 iyo Apple ichatanga pamusika gore rino, uye zvinoita sezvisinganzwisisike kwatiri tichifunga nguva diki iyo Series 1 uye 2 mamodheru anayo, asi isu hatina ona yavo inopenga inogona kuratidzwa. Chero zvazvingaitika tiri kuona kuti runyerekupe rwakanyanya pamusoro peiyo Apple Watch nyowani inosimbisa chidzitiro chechigadzirwa uye mukana wekuti wachi yacho iwane kubatana kweLTE uye ive yakazvimiririra kubva kune iyo iPhone, panguva ino izvo zviri pachena kwatiri ndezvekuti wachi iyi nyowani inogona kutora nguva mupfungwa dzeApple uye pamwe iri rinenge riri gore rekuratidzwa kwayo.
Chekutanga pane zvese kutaura nezve zviyero zveiyozvino Apple Watch. Aya masikirini ari AMOLED, zvinoita kuti chishandiso chive nehukama hwakanaka pakati pekushandisa bhatiri nemhando yechidzitiro kunyangwe tiri panze kana mumba, asi chii chinoitika kana aya ma AMOLED skrini akave ma MicroLED? Zvakanaka, pamwe izvi skrini ndidzo mhedzisiro yebasa rakaitwa nekambani yeLuxVue, iyo Apple yakatenga yekupedzisira 2014 uye ine kaviri kupenya kwazvino wachi kuratidzwa ine yakaderera kwazvo bhatiri kushandiswa uye yakaderera yekugadzira mutengo. Mupfungwa iyi, chingave chakaringana skrini yeApple sezvo ivo vaigona kudzikisa mutengo wechigadzirwa kumushandisi kana kutochengeta nekupa mukana wekushandisa LTE pane imwechete wachi.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuti zvese izvi hazvizopedzisira zvauya gore rino nekuda kweakawanda "mafonti" ane Apple nhasi, neyegumi yegumi gore yeiyo iPhone, iyo iMac nyowani ingadai iri kugadzirira kupera kwegore rino, Apple Paki uye nevamwe vese. Ngazvive sezvazvingaite, chakatinakira ndechekuti isu tinotaura nezve zvakasarudzika zvitsva muwachi izvo zvave zvichipfeka kubva kuvhurwa kwayo neshanduko dzinonakidza padanho revashandisi neGPS, kuramba mvura uye nevamwe, asi kuti izvi nguva inogona kunyange Kuwedzera kunatsiridzwa kwakakosha padanho rekubatanidza uye kuzvimiririra kweApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runyerekupe runonyevera kuti Apple Watch Series 3 yaizove new screen
MacOS Sierra 4 beta 10.12.5 yakaburitswa yevanogadzira
Dhata nyowani yedata reDenmark ichashandiswa kupisa dzimba